कोरोना भाइरसका कारण बसभन्दा सस्तो दिन थाले हवाई टिकट दिनेथाले विमान कम्पनी ! – Life Nepali
कोरोना भाइरसका कारण बसभन्दा सस्तो दिन थाले हवाई टिकट दिनेथाले विमान कम्पनी !
काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी पोखरामा स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी पर्यटकको पनि उत्तिकै आकर्षणको ग’न्तव्य हो । पोखराको सु’न्दरता नियाल्न हरेक दिन पर्यटकको घुँइचो’ लाग्ने पोखरा यतिबेला सुनसान छ । चीनबाट फै’लिएको को’रोना भा’इरसको संक्रमण १४५ भन्दा बढी देशमा फैलि’एपछि त्यस’को अ’सर अहिले पोखरामा देखिएको छ । जसले गर्दा काठमाडौं– पोखरा रुट’मा उ’डान हुने विमान कम्पनीले ह’वाई भा’डा स’स्तो बनाएका छन् ।
यतिसम्म कि काठ’माडौं–पोखरा रुटमा च’ल्ने लक्जरी बस’भन्दा हवाई भा’डा स’स्तो भएको छ । यो रुटमा च’ल्ने लक्ज’रीले २ हजा’र रुपै’याँसम्म टि’कट वा’पत पै’सा लिन्छन् । तर विमान क’म्पनीहरुले १७ सयदेखि नै टिकट बि’क्री गर्न थाले’का छन् । को’रोना भाइ’रसका का’रण यात्रुको सं’ख्यामा उल्ले’ख्य’ क’मी आ’एपछि’ वि’मान क’म्पनीहरुले सस्ता दरमा टि’कट बि’क्री गरिर’हेका हुन् । चैत २ गतेको मात्रै टिकट हेर्ने हो भने पो’खराका लागि १७२० रुपैयाँदेखि २ हजार रु’पैयाँमा स’स्तो द’रका टि’कट उप’लब्ध भइरहेका छन् ।
बसमा यात्रा गर्दा ए’कातिर दिनभरी समय ला’ग्ने तर ‘हवाई’ यात्रामा २५ मिनेटको ‘दूरीमा’ तय’ गर्न सकिने’ यो रुटमा यात्रुको संख्यामा कमी आउँदा पोखरामा पर्यटक व्यवसायमा नराम्रो असर परेको छ । पोखराको आकर्षण’ मा’निने प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय यतिबेला’ सं’कटमा पर्न था’लेको छ । प्याराग्लाइडिङ एसोसिएसनका महासचिव शैलेन्द्र रावतका अनुसार’ अहिले पर्यटकको संख्यामा कमी आउँदा घर भाडा, बैंकको ब्या’ज र कर्मचारीको त’लब दिन समेत गाह्रो अवस्था आइसकेको छ । त्यस्तै, पोखराका होटलको अकुपेन्सी पनि निकै तल झरेको छ भने पसल, रेष्टुराँको व्यवसाय पनि ठप्प जस्तै भएको छ ।
Previous आइतबार आज पनि घ’ट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
Next लगातार घटेको सुनको मूल्य ! फेरि आज बढ्यो -तोलामा कति पुग्यो ?
इतिहासमै पहिलो पटक यतिधेरैले सुनको मुल्य घटेपछि बजारमा सुन किन्नेहरुको घुइचो
सुनमा गिरावट आएपछी बजारमा सुन किन्नेहरुको घुईचो
प्र,हरी असई नै गाई लाई गोठमा क,रणी गर्दै गर्दा रं,गेहात समातिए (भिडियो सहित)
हे दैव ! पेटमा ८ महिनाको बच्चा हुर्कदै ,आमा रुदै कराउदै एक्लै भोकभोकै (हेर्नुस् भिडियो)
दाजुसँग बि’हे गर्न नपाए’पछि सुजिता’ ले आ’ /त्म’ह/त्या गरेको खु/’लासा
शुरु भयो सेवा : अब यसरी गरौ अनलाइनबाटै ब्लुबुक नवीकरण
चितवनमा मृ,त भेटिएका सेनाका युद्दालाई सेनाकै सिपाहीले नै सि’ध्याए !
40 mins ago Life Nepali